Zvese zvaunoda kuti uzive nezvemhepo turbine | Green Renewables
Munyika yesimba rinowedzerwazve, simba rezuva uye remhepo pasina mubvunzo zvinomira pachena. Yekutanga ine zvinhu zvinonzi maseru ezuva anokwanisa kutora mwaranzi yezuva nekuishandura kuita simba remagetsi. Yechipiri inoshandisa inonzi mhepo turbines kushandura simba iro mhepo inaro ive magetsi.
Mhepo turbines michina yakaoma kwazvo inoda kuti kudzidza kwekutanga kuve kunobatsira uye kugona. Uye zvakare, kune akati wandei mhando dzemhepo turbines uye mhepo simba. Iwe unoda kuziva here zvese zvine chekuita nemhepo turbines?
1 Hunhu hwemhepo turbine
3 Mhando dzemhepo turbines
3.1 Zvinoenderana neiyo rotor axis
3.1.1 Vertical akabatana
4 Horizontal akabatana
4.1 Zvinoenderana nesimba rakapihwa
Hunhu hwemhepo turbine
Sezvambotaurwa, turbine yemhepo mudziyo unokwanisa kushandura iyo kinetic simba remhepo kuita simba remagetsi. Izvi zvinoitwa nekushandisa mashizha anotenderera pakati pegumi nematatu nemakumi maviri kumukira paminiti. Shanduko dzinogona kutenderera mashizha dzinotsamira zvakanyanya parudzi rwetekinoroji inoshandiswa mukuvaka kwavo uye nesimba rinotakurwa nemhepo panguva iyoyo. Kazhinji, mashizha akavakwa nezvinhu zvakareruka anokwanisa kutendeuka kakawanda paminiti.
Sezvo mashizha anowedzera kukurumidza, huwandu hwesimba remagetsi hunokwanisa kugadzira uye nekudaro kushanda kwayo kwakakwirira. Kuti turbine yemhepo itange, simba rekubatsira rinodiwa iro rinopihwa kutanga kufamba kwaro. Zvino, kana yangotanga, imhepo ndiyo inova nebasa rekufambisa mashizha.
Mhepo turbines vane hafu yeupenyu hukuru kupfuura makore makumi maviri nemashanu. Kunyangwe kuiswa kwayo kwakadhura uye kudyara kwayakamboita kwakakwirira, sezvo iine hupenyu hwakareba hwakareba, inogona kuderedzwa zvakakwana uye kuwana mabhenefiti ehupfumi, uku ichidzikisa kukanganisa kune zvakatipoteredza uye kuburitswa kwemweya wegreenhouse unogadzirwa nemafuta.
Sezvo tekinoroji ichiwedzera, shanduko yemhepo turbine inoitendera kuti ive nehupenyu hwakareba hwakareba, pamwe nekukwanisa kugadzira simba rakawanda remagetsi uye kugona kuzviwana munzvimbo dzakanyanya kunaka.
Turbine yemhepo inonzi inokwanisa kushandura iyo kinetic simba remhepo kuita simba remagetsi. Nekudaro, iri kukwanisa sei kugadzira iro simba? Turbine yemhepo inokwanisa kugadzira magetsi muzvikamu zvakasiyana.
Otomatiki maitiro. Ichi chikamu chekutanga umo turbine yemhepo inotanga kushanda. Iyo inokwanisa kuzvitenderedza pachayo kuti itore zvizere mukana wesimba rinopihwa nemhepo. Izvi zvinozivikanwa nekuda kwedata iro rakanyorwa neane mhepo ine anemometer iyo yavakaisa muchikamu chavo chepamusoro. Ivo zvakare vane chikuva chinotenderera pane korona kumagumo kweshongwe.
Nereza dzoka. Mhepo inotanga kushandura mashizha. Kuti izvi zviitike, kumhanya kwayo kunofanirwa kunge kutenderedza 3,5 m / s. Simba rakakura rinodiwa mukugadziriswa kwemagetsi ekugadzira kunoitika kana mhepo iine kumhanya kwe11 m / s. Kana mhepo inoputika yakakura kudarika makumi maviri nemashanu / m, iwo mashizha anoiswa muchimiro chemureza kuitira kuti turbine yemhepo ibhureki, nokudaro ichidzivirira kunetseka kwakanyanya.
Kuwanza. Iyo rotor inoshandura shaft inononoka iyo inokwanisa kusimudza iyo yekumhanyisa kumhanya kubva kungangoita gumi nematatu paminiti kuenda ku13, 1.500.
Chizvarwa. Kutenda kune uyu wakawanda unowedzera shanduko paminiti, simba rayo rinogona kuendeswa kune iro jenareta ravakabatanidza, zvobva zvagadzira magetsi.
Kubuda. Simba remagetsi rinogadzirwa rinoitwa mukati meshongwe kusvika kuchitsiko. Kana ichinge yadzingirirwa ipapo, inoenda kune yepasi pevhu tambo kune chinzvimbo uko magetsi ayo anokwira zvakakwana kuti aibayise mumagetsi network uye nekuigovera kune mamwe ese ekushandisa mapoinzi.
Kuongorora. Kwezvikamu zvese zvesimba zvekugadzira zviitwe nemazvo, nzira yekutarisa uye yekutarisa iri kuramba ichidikanwa. Iwo akakosha mashandiro emhepo turbine anotariswa uye anotariswa kubva kuchitsitsinuro uye nzvimbo yekudzora. Kutenda neizvi, chero chiitiko mukushanda kwepurazi remhepo chinogona kuonekwa nekugadziriswa.
Mhando dzemhepo turbines
Kune mhando mbiri dzemhepo turbine zvinoenderana nekushandisa kwavo uye kugadzira kwesimba. Iyo yekutanga inotsamira pane axis yeiyo rotor (yakamira kana yakatwasuka) uye yekupedzisira pasimba rinopihwa.
Zvinoenderana neiyo rotor axis
Zvakanakisa zvikuru zverudzi urwu rwemhepo turbine ndezvekuti havadi iyo otomatiki yekumisikidza chikamu kuve omnidirectional. Uye zvakare, zvinhu zvacho zvakaita sejenareta uye zvinowanda zvakaiswa zvine mutsindo nevhu, izvo zvinotungamira mukuvandudzika kwakanyanya mumamiriro ekuchengetedza uye kudzikisira mitengo yemusangano.
Mune zvakaipira tinoona kuti vanazvo mashandiro epasi achienzaniswa nemamwe marudzi uye kuda kwayo kwekunze masisitimu anoita sekutanga kwemashizha. Uye zvakare, kana rotor ichida kukatanurwa kuti igadziriswe, ese michina yemagetsi turbine inofanirwa kubviswa.
Mazhinji emagetsi emhepo akavakirwa kuti aabatanidze kunetiweki yemagetsi ane matatu-mashizha uye ane axis yakatwasuka. Aya maturbine emhepo ane kugona kukuru uye kuita kumhanya kutenderera kumhanya paminiti. Izvi zvinoreva kuti iwe unoda mashoma ekuwedzera. Uye zvakare, nekuda kwekuvakwa kwayo kwepamusoro, inokwanisa kutora zvirinani kushandisa kwesimba remhepo pakukwirira.
Zvinoenderana nesimba rakapihwa
Zvichienderana nesimba ravanopa, kune akati wandei mhando yemhepo turbines Yekutanga michina yemagetsi mashoma. Izvo zvine chekuita nekushandiswa kwesimbi yemagetsi, senge yekupomba mvura, uye ivo vanokwanisa kupa simba kutenderedza 50Kw. Mimwe mhando yemidziyo inogona zvakare kushandiswa kuwedzera iyo yakazara simba rinopihwa. Nhasi ivo vanoshandiswa senzvimbo yesimba yemagetsi michina kana yakasarudzika magetsi.
Simba repakati midziyo. Aya ndiwo masekonzi uye ari mukati kugadzirwa huwandu hweanosvika 150Kw. Izvo hazviwanzo kubatanidzwa nemabhatiri, asi zviri pamagetsi network.
Chekupedzisira, yakasimba-simba michina inoshandiswa kugadzirwa kwesimba remagetsi mukutengesa uye yakabatana neiyo grid uye mumapoka. Kugadzirwa kwayo kunosvika kumagigawatts.
Neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda pamusoro pemagetsi emhepo uye mashandiro awo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Simba remhepo » Zvese zvaunoda kuti uzive nezvemhepo turbines